Ireo mpifaninana aminao dia miasa amin'ny paikady IoT handevina anao | Martech Zone
Ny isan'ny fitaovana mifandray amin'ny Internet ao an-tranoko sy ao amin'ny biraoko dia mitombo hatrany isam-bolana. Ireo entana rehetra ananantsika amin'izao fotoana izao dia manana tanjona miharihary - toy ny fanaraha-maso maivana, baikon'ny feo ary ther termat azo ovaina. Na izany aza, ny fitohizan'ny teknolojia sy ny fifandraisan'izy ireo dia miteraka fikorontanana eo amin'ny orinasa izay tsy mbola hitantsika teo aloha.
Vao tsy ela akory izay, nandefasana kopian'ny Internet amin'ny zavatra: Digitize or Die: Manova ny orinasanao. Raiso ny fivoarana niomerika. Mitsangàna ambonin'ny fifaninanana, boky nosoratan'i Nicolas Windpassinger. Nicolas no filoha lefitry ny Global Schneider Electric's EcoXpert ™ Partner Programme, izay ny tanjony dia ny mampifandray ireo haitao sy fahaizana ananan'ireo mpamatsy teknolojia malaza manerantany, manao làlana ho an'ny tranobe manan-tsaina sy ny Internet-javatra, ary fanolorana serivisy sy vahaolana marani-tsaina kokoa, mirindra sy mahomby kokoa ho an'ny mpanjifa.
Araka ny fanazavan'ity boky mahasoa ity dia mihetsika ny tontolon'ny vatana - lasa marani-tsaina sy mifandray. Raha ny marina dia ny valiny no fiandohan'ny dianao: fanabeazana. Vakio ny momba ny Blockchain sy ny faharanitan-tsaina artifisialy satria hanova an'izao tontolo izao izy ireo. Ny dingana manaraka ataonao dia pejy roa mialoha; ampodio izy ireo hahatakatra ny fitsipiky ny IoT amin'ny lalao ary hianatra ny fampiasana azy ireo ho tombontsoanao. Don Tapscott, mpanoratra ny Wikinomics
Tsy miresaka ny fahafaha-manao fotsiny i Nicolas IoT, miresaka amin'ny antsipiriany izy ny amin'ny fomba azo ovaina amin'ny paikadin'ny IoT ny orinasa antonony tsy misy sisin'ny teknolojia. Efa namaky momba ny fitaovana fitsaboana, automatique an-trano, ary angovo izahay rehetra… fa ahoana kosa ny amin'ireo zavatra tsy noeritreretinao mihitsy. Ireto misy ohatra vitsivitsy hitako:
Latabatra Smart Panasonic
Sarotra ny hino fa miantsena latabatra ianao amin'ny ho avy noho ny fahaizany IoT… fa rehefa avy mijery ity horonantsary ity ianao dia hiova hevitra.
Iza no mba nieritreritra an'izay ondana mifandray - miaraka amina mpandahateny bluereo, fanaraha-maso snore ary famakafakana ny torimaso. Eto, eto…
Sensors amin'ny famokarana labiera
Raha mpamaky labiera ianao, ahoana no ahafahanao manara-maso tsara kokoa ny fizotry ny labiera mba hahazoana antoka fa tsy miova sy mifehy?
Ny tena izy dia IoT dia hatraiza hatraiza hatraiza hatraiza amin'ny vokatra sy serivisy rehetra amin'ny ho avy. Nicolas'book' dia rafitra iray hijeren'ny orinasa ny vokatra sy serivisin'izy ireo manokana hamaritana ny fomba hanovan'ny fampiasam-bola amin'ny fanavaozana IoT ny orinasany. Ary manomboka amin'ny mpanjifanao izany rehetra izany.
Mandavaka na maty dia ampiasain'ny mpanapa-kevitra eo amin'ny sehatry ny laharana voalohany hametrahana nomerika ny paikadiny, ny portfolio, ny maodelin'ny raharaham-barotra ary ny fandaminana. Ity boky ity dia mamaritra ny atao hoe IoT, ny vokany ary ny vokany, ary koa ny fomba fampiasana ny fanovana nomerika ho tombontsoanao. Hianaranao ao anatin'ny boky:
Ny dikan'ny IoT amin'ny orinasa rehetra
Maninona ny IoT sy ny revolisiona dizitaly no tandindomin-doza amin'ny maodelinao sy ny fahavelomanao
Izay tokony ho fantatrao mba hahatakarana tsara ilay olana
IoT⁴ Fomba fiasa stratejika - Ireo dingana efatra tokony harahin'ny orinasanao hanovana ny asany mba ho velona
Ny IoT dia hanakorontana ny orinasa rehetra, tafiditra ao ny mpitarika azy ireo, ary azonao atao ny manararaotra an'ity fanovana ity ho tombontsoanao. Ny IoT dia efa manova tsena sy orinasa marobe. Ny fahafantarana ireo fanovana ireo, ary ny tena zava-dehibe, ny fahazoana mampiasa azy ireo mba hitombo ny lohany sy ny soroka eo ambonin'ny fifaninanana dia iray amin'ireo tanjon'ity boky ity.
Vidio ny boky - Digitize or Die
Tags: fivoarana niomerikamanaova nomerika na matyDon tapscottaterineto ny zavatraiotNicolas WindpassingerSchneider Electric's EcoXpert Partner ProgrammeWikinomics